Oromo News 05.26.21 | KWIT
Talaali corona virus namni fudhati gad xiqqaata dhufu jira, ogeessa fayyaa Iowa akka jedheti torbaan kana keessa namni talaali corona virus fudhate percent 12% qofa akka tae federal government irraa argatanii jiru.
State 17 counties 99 kan qabdu ramaddii isaani fudhatanii jiru. Tokkuma isaa martuu fudhate jira.
Akkaa gabaasa New York Times himanitti, jiraattota Iowa percent 43% guutuman guututti talaali akka talaali corona virus fudhatani jiran himan. Kunis akka biyyatiti 16th irra jirti.
Sioux City Community School District guyyaa graduation guyyaa sanbata kan Tyson Events Center tti kan jiruuf seera haaraawa baasan jiran. School district torbaan darbe keessa mootuma kan mallatteesan haguugi haabaafatamu jedhan namni dide waliinn akka deemu jiran himan. District seera kaahame ture namni dhufu ticket lakkaawame seenu qaban manneen barumsa Sioux City High School akka irraa kaasan himan. Oduun haarawa akka gad dhiifameti district nama haguugi fuula godhachuu fedhuufi hin feenele akka degaran himan. Gabaasni live illee kan gadi dhiifamu ta’a.
Gareen booyye oomishan US deparmantan Agriculture gaafachu jirani waan kaluu kanatti abbaan seera ajaje sunis akka campany wanni martuu akka daddafi dalagaa san geggeesan goosisan.
Hojattooni National Pork Council akka jedhetti abbaan murtii hojii suuta dalagamu akka daddafi dalagamu erga murteesse booda qonnaan bultoonnni $million 80 akka gad xiqqeesan nigodhama jedhan. Hojattooni meatpacking hojii daddafuun hojattoota fayyaa fi nageenya isaani balaa irra buusa jedhan. Gareen booyye oomishan USDA akka gafatanitti ammati akka daddafi harka jahaan dalagu jalqaaban himan.